के हाे प्रचण्ड ? प्रचण्डले राजनीतिमा धेरै थरि प्रयोग गरे, अव के गर्दैछन प्रचण्ड ? - edChitwan
के हाे प्रचण्ड ? प्रचण्डले राजनीतिमा धेरै थरि प्रयोग गरे, अव के गर्दैछन प्रचण्ड ?
एक थरि नेपाली छन जो दुई किलो चामलको लागि दुई दिन हिंडेर सदरमुक़ाम पुग्छन । अर्को थरि नेपाली छन जो मोबाइलका स्क्रीन चर्किने गरी नेताको सत्तोसराप गर्छन । जो जसको हातमा मोबाइल छ, जो जसको इण्टरनेट,टी भी मा पहुँच छ, आजको दिनमा प्रचण्ड कसैलाई मन पर्दैनन, थाहा छ । कसैलाई मन नपर्ने मान्छेको बारेमा लेखेर म स्वयं पनि ठूलो रिस्क मोलिरहेको छु,त्यो पनि थाहा छ । तर जसरी प्रचण्डहरुका असफल प्रयोगले स्थापित गरिदिएका सत्यलाई इतिहासले आँखा चिम्लिने ठाउँ छैन, त्यसरी नै सत्य नलेखेर भोलि आफनै सन्तानबाट समेत कायर पुर्खाको उपाधि मलाई पाउनु छैन । प्रक्रियागत रूपमा प्रचण्डले अनगिंती गल्ती गरेका होलान । युद्धकाल देखि शान्ति प्रक्रिया सम्म आइपुग्दा प्रचण्डले गरेका गल्तीलाई उनकै पश्चात्ताप र स्विकारोक्तिले पखालिसकेका छन । प्रचण्ड एक कदम अघि र एक कदम पछि हुन सक्ने लचकदार राजनीतिज्ञ हुन । उनी जड़ होईनन । तर नेपाली समाज जड़ नेतृत्वको माग गर्छ । प्रचण्डले जुन जोखिम मोलेर सामाजिक चेतनालाई यहाँ सम्म ल्याए, त्यसको लागि उनको मृत्युको कामना गर्नै पर्छ । अरु नभए पनि, हामीलाई यति बिघ्न गाली गर्न पाउने छूट त दिलाएकै हुन उनले । नत्र त ४६ साल सम्म राजाको डर, ४६ साल पछि दलको डर, ५२ साल पछि बन्दूक़को डर, हामीलाई कम्ता सकस थियो ? न कसैलाई गाली गर्न पाउनु, न तथानाम भन्न पाउनु । यो चेतना र यो छूटको लागि प्रचण्डको फूट्टी कौड़ी योगदान छैन भने झैं गरी आउनोस, सामूहिक स्वरमा प्रचण्डको मृत्युको कामना गरौं । बदलिनै नचाहने हाम्रा बानी हरुक़ो रक्षाको लागि, ‘हामीले पाए त पुगिहाल्यो नि उसले किन पाउनु पर्यो’ भन्ने मर्म सहितको हाम्रो सद्भावको ख़ातिर, अनि सर्वस्वीकार्य हाम्रो सनातन दासताको ख़ातिर, प्रचण्डलाई जर्याकजुरुक बोकर आर्यघाट सम्म पूर्याऊँ । साभार हिमाल पाेष्ट
यसपछिकाे घटनाक्रमकाे संभावना वारे मेराे अाफ्ने विश्लेषण अाँउदैछ ।